Iibinta Canbaha - Dharka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay xilli ciyaareedkan | Bezzia
Dharka aasaasiga ah oo aad ka heli doonto iibka Cambaha
Susana godoy | 14/01/2022 10:00 | Maxaan xirtaa
ka Iibinta cambaha Waxay ku soo garaaceen albaabkaaga oo hadda waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis runtii cajiib ah. Sidaa darteed waa inaadan lumin fursadda aad ku raaxaysanayso mid kasta oo ka mid ah dharka aan kuu soo xulnay. Maadaama aad u baahan doonto iyaga maalinba maalinta ka dambaysa sababtoo ah runtii waa aasaas.
Waxa intaa dheer in, aad hore u ogaatay in iibku had iyo jeer waa waqtiga ugu fiican si aad u hesho wararka qaar ka mid ah oo aad qaadi karto dhowr bilood. Dharka shaqaynaya in aad sidoo kale ka heli doontaa xulashada soo socota. Ma rabtaa inaad ogaato waxa uu yahay? U fiirso mid kasta oo iyaga ka mid ah si aad ugu raaxaysato qaabka ugu fiican xilli ciyaareedkan!
1 Canbaha iibka funaanadaha iyo cardigans
2 jaakadaha iibka ah
3 Dharka ama goonnada?
4 Surwaal denim iyo dungarees
Canbaha iibka funaanadaha iyo cardigans
Iibka canbaha oo rarnaa ayaa yimid fikrado fiican marka la eego funaanadaha iyo cardigans sidoo kale. Taasi waa sababta kiiska ugu horreeya, waxaan dooneynaa inaan helno dhar ballaadhan, sida caadiga ah, taas oo na siin doonta taabashada raaxada maalin kasta. Laakiin taasi maaha oo dhan, sababtoo ah dhinaca kale aasaaska weyn ayaa had iyo jeer ku jiri doona dhinaceena, laakiin marka lagu daro, faahfaahinta sida rhinestones, daabacaadda ama qoorta shaabadda ma rabaan inay seegaan bandhigga. Taasi waa sababta aad u dooran karto noocyo kala duwan oo qiimo jaban inta aad qiyaasi karto.
Dabcan, haddii aad doorbidayso inaad xirato jaakad, waxaad had iyo jeer haysataa ikhtiyaarka iyo wax badan oo ku jira shirkadda. Sababtoo ah waxay sidoo kale u muuqdaan kuwo dhammaystiran oo ballaadhan si ay nooga tagaan sahlanaanta ku dar funaanado feeraha leh ama funaanado hoostooda. Waa waqtigii la dooran lahaa dhar jilicsan oo fudud, oo leh badhammo waaweyn si ay u siiyaan shakhsiyad dheeraad ah, haddii ay suurtagal tahay. Midabada dhexdhexaadka ah ama aasaasiga ah ayaa noqon doona jilayaasha weligeed ah.
jaakadaha iibka ah
Dabcan xilli ciyaareedkan mid ka mid ah dharka aasaasiga ah ayaa ku dhacaya jaakadaha. Sababtoo ah waxay yihiin kuwa noo ogolaanaya inaan sii raaxaysanno oo dabcan, had iyo jeer ka fogow qabowga. Marka, dhinaca kale waxaan samatabbixinay fikrad aad ka fiican oo ka mid ah iibka cambaha iyo in ay tahay dhar dib loo rogi karo. Markaa waxaan leenahay labo mid ah oo aan jecelnahay taas: Dhanka kale, saameynta maqaarka halka kan kale, waxay noqon doontaa timaha naga ilaalinaya diirimaad.
Laakiin haddii aad jeceshahay jaakadahaas Iyagu kama baxaan qaabka sida ay noqon karaan kuwa dhogorta leh oo laba naasood, nasiib baad leedahay. Waxay u muuqataa in shirkadu ay sidoo kale dareentay. Sababtoo ah waxay yihiin kuwo aasaasi ah oo aan ku abuuri karno dhamaystir iyo qaabab kala duwan. Laga soo bilaabo kuwa lagu daro jooniska sida kuwa kale ee rasmiga ah oo leh surwaal dhar ah. Adiga ayay ku xiran tahay!
Dharka ama goonnada?
Haddii ay xoogaa kugu adag tahay inaad doorato, markaas waxaa fiican inaad dooratid labadaba. Sababtoo ah dhinac Midi iyo lebbiska ribbed had iyo jeer waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Si aad u badan oo aad u raaci karto iyaga oo leh jaakad, suunka ballaaran ama iyada oo aan waxba haysan si aad u siiso dhammaan caannimada. Dhanka kale, goonooyinka dhererka jilibka leh ee daabacaadda midabada aasaasiga ah ayaa sidoo kale ah mid kale oo ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee lagu dhexgelin karo moodada nolol maalmeedkeena.
Surwaal denim iyo dungarees
Habka lo'da ayaa laga waayay dharka iibka dhexdooda. in Mango. Laakiin kiiskan waxaan rabnay inaan ku muujinno bib. Sababtoo ah had iyo jeer waa mid kale oo ka mid ah dharka bixiya raaxada weyn iyo sida, waxay u qalmaan inay joogaan nolosheena. Hadda, surwaal toosan iyo marado ma foga. Sababtoo ah waxaan u xiran karnaa shaqada ama shirarka muhiimka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay kugu sugayaan iibka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Dharka aasaasiga ah oo aad ka heli doonto iibka Cambaha
Talooyinka ugu fiican ee safarka
5 cadawga xidhiidhka